Gbasara Anyị - Yangzhou qiangjing egwuregwu ihe egwuregwu Co., Ltd.
• ihe eji egwu egwuregwu Yangzhou qiangjin co., Ltd. hibere na 1992, nke dị n'obodo akụkọ ọdịbendị na ọdịbendị Jiangdu nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Yangzhou, n'akụkụ okporo ụzọ awara awara nke Beijing-Shanghai na ọdụ ụgbọ elu nke Jiangsu Central. Companylọ ọrụ ahụ bụ ngwongwo nchekwa egwuregwu, ramin badminton, ihe ndozi tennis, mmepe, nrụpụta, ọrụ dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ugbu a, kpuchie mpaghara 18,000 square mita, ebe a na-ewu mita 9000 square, nwere mmepụta dị elu na akụrụngwa 300 setịpụrụ. Ihe karịrị ndị ọrụ 300, gụnyere ndị na-emepụta ihe osise 20, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ, karịa mmadụ iri atọ, mmadụ iri nwere utu aha ọkachamara. Companylọ ọrụ gafere asambodo njikwa mma ISO9001 na 2004, ngwaahịa niile agafere ngalaba na-ahụ maka njikwa dị mma, enyere ya aha ama ama Jiangsu, akara azụmaahịa ama ama nke Yangzhou na ndị ọzọ.
• N'ime afọ ndị gafeworonụ, afọ ojuju ndị ahịa bụ ịchụ ihe ebighi ebi anyị, "lencedị mma, ịchụso kacha mma" dịka ebumnuche ahụ. Achịkwa siri ike na ogo ngwaahịa: "Ọnọdụ atọ atọ", "anọ anaghị eme." na ngwaahịa ndị emepụtara, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ebumnuche "okpukpu abụọ" bụ "ntụpọ efu", "mkpesa efu." Ndị Qiangjin kwụsịrị iji obi ike kwụọ ntụkwasị obi nke ndị na - azụ ahịa .Mgbe ngwaahịa dị mma, teknụzụ ohuru, ọrụ azụmaahịa zuru oke iji nweta ihu ọma nke ụlọ na azụmaahịa, ngwaahịa niile dị na mba ahụ, e bufere na North America, European Union, Australia, Japan, South Korea, South Asia na mpaghara na mba ndị ọzọ.
• companylọ ọrụ anyị ga-aga n'ihu na-ewusi ihe ọhụụ na teknụzụ ike, na-etinye atụmatụ akụ na ụba mmadụ, mmejuputa zuru oke nke njikwa arụmọrụ Performance Excellence, dị ka oge niile, na-elekwasị anya na njikwa ngwaahịa, maka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, itinye onyinye ka ukwuu maka mmepe nke ụlọ ọrụ egwuregwu China. .